Ubuncane be-alumina tube ye-ceramic China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > Ama-Tuber Ceramic > I-Alumina Tube Ceramic > Ubuncane be-alumina tube ye-ceramic
Ngomunye umshini wokusebenzisa umshini, i-small diameter ceramic tube e-aluminium oxide ceramics iyadingeka, njenge-ferrile yensimbi, imikhono ye-ceramic njalo njalo. Singenza ububanzi bube ngu-0.80mm.
Ukukhethwa kwezigaba ezahlukene ze-alumina tube tube kuyatholakala, kuhlanganisa kusuka ku-95% kuya ku-99.8%. Inqubo eyakhiwe ngokuyinhloko esiyisebenzisayo ihlanganisa ukwakhiwa komjovo we-ceramic, ukucindezela okomile nokucindezela okushisayo.
Siyakwazi ukufeza ubukhulu bokucushwa okuyinkimbinkimbi yehubhu ye-ceramic nge-diameter encane kakhulu ngaphakathi ukuze ibe yi-0.6mm, njengokujikeleza, isikwele, isikhumba esiphezulu, i-hex, i-double-bores, i-tri-bores, njll eyodwa evulekile njll Okwamanje, singakwazi ukufezekisa imfuneko ecacile kakhulu yezinto ezibonakalayo ngokubheka okuhle, ukuchithwa kwe-CNC.
5V 7V 12V I-Ceramic Heating Element ye-E-Cigarettes